वीरगन्जमा सडक खाना महोत्सव «
उनका अनुसार अघिल्लो वर्ष पहिलो पटक आयोजना गरिएको सडक खाना महोत्सवमा २ लाख ४० हजारको कुपन बिक्री भएको थियो । यसपटक पाँचलाखको कुपन छपाइ भएको मध्य साढे ४ लाखको कुपन बिक्री भएको हो । महोत्सवमा खानेकुराहरू थकाली, मारवाडीलगायतका विभिन्न परिकारहरू, घोडचढी सवार तथा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूको पनि प्रस्तुति थियो । नयाँ वर्ष २०७५ को पूर्वसन्ध्यामा महोत्सवको आयोजना गरेको महोत्सवमा ठेला, साइकल, रिक्सा, स्कुटर, टावर सेल्फी स्ट्याण्डका रूपमा निर्माण गरी सेल्फी स्ट्यान्डले दर्शकहरूको ध्यानकार्षण गराएको थियो । हरेक वर्ष वैशाख १ गते नेपाली नयाँ वर्ष भए पनि अधिकांश नेपालीहरू पछिल्लो समयमा अंग्रेजी नयाँ वर्ष इस्वी सन्लाई बढी महत्व दिन थालेपछि नेपालीको ‘नयाँ वर्ष वैशाख १ गते हो’ भन्ने बोध गराउनका लागि र वीरगन्जमा आन्तरिक रूपमा पर्यटन प्रवद्र्धनको लागि महोत्सवको आयोजना गरिएको ग्रिनसिटीका सदस्य जालानले बताए ।
उनले भने, “हरेक वैशाख १ गते नयाँ वर्ष हाम्रो हो तर हामी सधैं अंग्रेजी नयाँ बर्षमा बाहिर घुम्न जाने गरेका छौं । वीरगन्जमै हामी वैशाख १ गतेको नयाँ वर्ष मनाउन किन नसक्ने ? त्यसैले यसको विशेष महत्व दर्शाउनका लागि महोत्सवको आयोजना गरिएको हो ।” जनवरी १ तारिकमा भारतीय तथा नेपाली नागरिकहरू नयाँ वर्ष मनाउन देशका विभिन्न स्थानमा जाने गरेका छन् । उनीहरूलाई वैशाख १ को नयाँ वर्षको महत्व बुझाउन र वीरगन्जलाई आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गरी वीरगन्जलाई वाह्य पर्यटकहरूको लागि पनि गन्तव्य बनाउने उद्देश्य रहेको उनको भनाइ छ ।
वीरगन्ज आर्थिक तथा औद्योगिक सहर भनिए पनि विभिन्न मेला तथा महोत्सवहरूमा खासै आकर्षण घट्दै गएकाले पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि पनि यस्ता महोत्सवहरू आवश्यक रहेको ग्रिनसिटी आदर्शनगरका अध्यक्ष प्रकाश खेतानको भनाइ छ । उनी भन्छन्, “सबैजना नयाँ बर्ष मनाउन वीरगन्जभन्दा बाहिर जाने गरेका छन् । वीरगन्जमै हामी किन यस्ता महोत्सवको आयोजना गर्न सक्दैनौं ? गर्न चाहेमा वीरगन्जमा सबै प्रकारका मेला महोत्सवमार्फत विकास गर्न सकिन्छ । हामीलाई वीरगन्जवासीको साथ र सहयोग भए पुग्छ ।” साढे पाँच महिनाको भारतीय नाकाबन्दी र मधेस आन्दोलनका कारण थलिएको वीरगन्जको आर्थिक विकासका लागि पनि यस्ता महोत्सवहरूको आवश्यकता रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।